Akụkọ - Gịnị ka m kwesịrị ịme ma ọ bụrụ na egbe mmanụ na-ekpuchi onwe ya enweghị ike ịbụ akara nke onwe?
Kedu ihe m ga - eme ma ọ bụrụ na egbe mmanụ eji ejide onwe ya enweghị ike ịkpụchi onwe ya?
Kedu ihe m ga - eme ma ọ bụrụ na egbe mmanụ na --emepụta onwe ya enweghị ike ịkara onwe ya?
Ma egbe mmanụ ụgbọ ala nke nwere mmanụ ụgbọ ala nwere ike ịdechi onwe ya dabere na ma ụlọ ọkụ nwere ike ịmebe agụụ zuru oke. Yabụ, mgbe egbe mmanụ na-akwụ mmanụ enweghị ike ijide onwe ya, ekwesịrị idozi ya dịka echiche ndị a:
1. Lelee ma ọ bụrụ na akara dị na nkwonkwo dị n'etiti gbọmgbọm na egbe ahụ bụ ihe a pụrụ ịtụkwasị obi. Lelee ma ọ bụrụ na mgbanaka O mebiri na nkwonkwo. Ọ bụrụ na ọ mebiri emebi, enwere ike dochie ya mgbe dochie ya.
2. Ọ bụrụ na e nwere ihe mba ọzọ na taper elu nke gbọmgbọm cone valvụ, wepụ gbọmgbọm ma wepu unyi ma tinye ya ọzọ.
3. Lelee ụlọ agụụ maka nkwụsị. Mgbe agụụ mkpuchi, agụụ agụụ diaphragm na-agbajikwa ma ọ bụ kpochidoro ịghasa na-adịghị ebe, agụụ enweghị ike ịmepụta na onwe-akara.
4. Obere obere ihe anaghị emechi onwe ya: n'ihe banyere obere agba agba, mmiri mmiri na-agbapụta dị ntakịrị, mmetụ mmiri mmiri na-adịghị ike, ọnụ ụlọ agụụ agaghị ewepụta agụụ zuru ezu, na mmiri mmiri nke opupu ihe ubi agaghị emeri iji mee ka mmanụ ụgbọ ala ahụ nwee njide onwe ya.
5 Ọ bụrụ na ị ghọta ụkpụrụ ọrụ na ojiji nke egbe a na-eme onwe gị, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị, anyị ga-enye gị azịza na-eju afọ.
Post oge: Sep-25-2019